Chiziviso cheZororo cheMutambo weChirimo 2021
Vadiwa Vedare: Tinokutendai mose nerutsigiro rwenyu rwakasimba mugore ra2020. Yakanga iri nguva yakaoma neCOVID-19 asi isu takapfuura neese akaomarara mugore rapfuura. Ngatirumbidzei nesimba redu guru uye kubudirira. Mutambo weChirimo wa2021 wave kusvika, vese vashandi veShenzhen guta reLifan zana ...
Matipi eKisimusi 2020
Kune vanhu vazhinji, Kisimusi ichave yakanyanya kusiyana gore rino. Muchikamu chino, tinopa matipi mashanu ekutanga kubatsira kusimbisa hutano hwedu panguva uye mushure megore ra2020 rezororo. Zuva rega rega, masayendisiti ari kudzidza zvakawanda nezvekuti SARS-CoV-2 inoshanda sei, uye majekiseni ari kuburitswa. Ehe, 2020 yanga iri chall ...
Iyo yazvino in vitro yekuongorora indasitiri inoshandisa munguva yekukurumidza kukura
Novel coronavirus pneumonia novel coronavirus pneumonia ndiyo inonyanya kukosha pakati pekutanga. Iyo inoverengeka coronavirus pneumonia (IVD) indasitiri inokura nekukurumidza nekukurumidza kukurumidza kweakasiyana matekinoroji matsva uye iyo catalysis yeiyo nyowani korona pneumonia. Inotarisirwa kuve pa ...
Chitima traffic kubva kuChina kuenda kuEurope yakamiswa
Chitima traffic kubva kuChina kuenda kumuganhu neKazakhstan neMongolia yamiswa, kunze kwenzendo dzakarongwa. Kumiswa uku kwaive kwatovepo kubvira 8 Zvita uye haisati yawedzerwa kusvika 16 Zvita, 6pm. Chikonzero chekumiswa kwacho kwakanyanya kuzara pamuganhu ...
Nzira yevagadziri veIVD kuti vasiye vagare pasi pechirwere
Kubva pakatanga iyo nyowani coronavirus, iyo haze yakafukidzwa munyika yeChina. Sangano reNyika reVanhu rakabatana rakapindura zvine mutsindo "denda" rehondo isina hutsi hwepfuti. Zvisinei, rimwe wave harina kuenzaniswa uye rimwe rakatanga. Iyi nyowani nyowani ...